Mpanoratra nasongadina: Diego Casaes · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2018 14:17 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny novambra 2009)
Tamin'ny herinandro teo aho tao amin'ny Dinika Kolontsaina Nomerika Breziliana [pt] nanambintana nihaona tamin'i Diego Casaes, mpanoratra nanolo-tena tato amin'ny Global Voices sady mpandika teny avy ao Salvador, Brezila. Ny ankamaroan'ny soratr'i Diego tato amin'ny Global Voices dia nampielezana fanairana momba ny fandrahonana ara-panaovandalàna sy fahafahana an-tserasera Brezila, toy ilay “Volavolan-dalàna Azeredo“. Namoaka mombamomba ny mpikatroka an-tserasera toa an'i João Carlos Caribé sy i Daniel Pádua (izay vao namoy ny ainy noho ny homamiadana) sy ny fiezahan-dry zareo hiaro ny fahafahan'ny tsirairay mbamin'ny fampifandraisana ara-piarahamonina amin'ny alalan'ny aterineto koa izy.
HItodi-doha tsy ho ela any Copenhagen i Diego hanao tatitra momba ny Kaoferansan'ny Firenena Mikambana momba Fikorontanan'ny Toetrandro tontosaina manomboka ny 7 ka hatramin'ny 18 desambra. Nasaina hanao tatitra izy tamin'ny nahazoany lokan'ny fifaninanana famahanam-bilaogy Eritrereto Izany (Think About It), izay ahafahanao mamaky ny lahatsorany rehetra mifandraika amin'ny fikorontanan'ny toetrandro ao Brezila ato.
Izaho no Diego Casaes. Avy ao Brezila aho. Monina ao Salvador ao avaratra atsinanan'i Brezila. Izaho no mpandrindra ny ekipam-pandikanteny portiogey ary manoratra mirotsaka an-tsitrapo ato amin'ny Global Voices aho.
David Sasaki: Ary ahoana ny nanombohanao tato amin'ny Global Voices?
Diego Casaes: Nanomboka aho raha tafahoana tamin'i Paula Goes (mpanoratra ato amin'ny Global Voices sady mpandika teny portiogey) tao amin'ny Twitter. Nanasa ahy izy hanoratra. Momba ny tondra-drano tao Brezila tamin'izany fotoana izany. Ary tamin'ny volana May 2009, tamin'ity taona ity. Izany hoe vao fito volana izay.
DS: Inona ny lohahevitra hafa soratanao ato amin'ny Global Voices?
DC: Amin'ny ankapobeny aho manoratra momba ny fahalalaham-pitenenana sy ny fikatrohana an-tserasera. Indroa aho nanoratra momba ny tontolo iainana. Matetika manoratra momba ny fikatrohana an-tserasera.
DS: Ahoana ny fahitanao ny maha-hafa ny tontolom-bilaogy breziliana manoloana ireo tontolom-bilaogy hafa manerana izao tontolo izao?
DC: Izany hoe, angamba izahay mafana fo be rehefa miresaka lohahevitra ka nalaina avy amin'ny fiainana andavanandro mankany amin'ny bilaogin-dry zareo izany. Noho izany mazava fo tokoa ry zareo ary mifampiresaka mafy tokoa amin'ny hafa. Mihiaka ry zareo rehefa ao amin'ny Twitter. Any amin'ny bilaogy maro ianao mahita fanehoan-kevitra maro dia maro … toy ny fanehoan-kevitra mirehidrehitra. Olona tia zavatra tokoa. Raha ny marina dia mahaliana ny mahita ny tontolom-bilaogy breziliana hafa noho ny hafa.
DS: Ary nahoana ianao no mieritreritra fa izay ilay izy? Mieritreritra ve ianao fa… kolontsaina fotsiny izany?
DC: Angamba. Satria niresaka tamin'ny namana iray avy any Kazakhstan aho ary nilaza izy fa tsy dia mavitrika loatra ny tontolom-bilaogy any Kazakhstan. Manana lahatsoratra bilaogy maro ry zareo, fa tsy betsaka ny fanehoan-kevitra. Hafa noho izany indrindra anefa ny ao Brezila. Mahita fanehoan-kevitra maro dia maro ao amin'ny lahatsoratra bilaogy ianao. Tena miresa-javatra tokoa ny olona.
DS: Ka inona izany ny zavatra resahin'ny bilaogera breziliana tao ho ao izay?
DC: Tao ho ao izay, indrindra famin'ity taona 2009 ity, tena miankin-doha mihitsy ry zareo miresaka momba ny fikatrohana an-tserasera. Satria aty aminay maro dia maro ny volavolan-dalàna tadiavina hanesorana ny fahafahanay amin'ny aterineto. Noho izany noho izay toe-javatra misy antsika izay, dia maro ny bilaogy miompana amin'ny fikatrohana an-tserasera sy ny fahalalaham-pitenenana miresaka momba izany rehetra izany.
DS: Inona ny zavatra soratanao ao amin'ny bilaoginao manokana?
DC: Izany hoe fomba fijeriko sasantsasany amin'ny lohahevitra maro momba ny tenimita, fahalalaham-pitenenana. Saingy manana bilaogy mombany kolontsaina japoney ihany koa aho satria mpihaino hira japoney ary mijery sarimiaina japoney maro. Ka dia manoratra zavatra maro momba izany aho. Mahafinaritra satria tsy misy mieritreritra hoe hanoratra momba izany ianao. Tsy tena Japoney aho ary tsy mitovy endrika amin'ny Japoney, fa tiako ilay izy.
DS: Handeha ho any Copenhagen ianao, sa tsy izany? Hanatrika kaoferansa momba ny fikorontanan'ny toetrandro. Ary ahoana no nahatongavan'izany?
DC: Izany hoe, ny marina dia nahazo hafatra avy amin'ny mombamomba ny mpamaky Global Voices iray aho mangataka amiko ho any Copenhagen amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana Saino Izany, fifaninanana famahanam-bilaogy eoropeana. Nandeha nankany Copenhagen aho tamin'ny Septambra ary tamin'ny lanonam-panokafana iray raha nahare fa hibilaogy momba ny fikorontanan'ny toetrandro izahay. Ankehitriny, tamin'ny herinandro, nahazo vaovao izahay -izaho sy ny bandy roa hafa – fa voafantina izahay hisolo tena ny Foibem-Panaovan-Gazety Eoropeana (European Journalism Centre) mandritra ny COP15. Niainga tamin'ny bilaogera miisa 92 izahay no telo sisa tavela.
DS: Solana Larsen avy ao amin'ny Global Voices no manontany, “Inona no ataonao any Copenhagen amin'io loka famahanam-bilaogy io?”
DC: Izany hoe, mnantena aho hitondra ny fomba fijerin'ny bilaogera sy ny mpanao gazety mandritra ny COP15. Ary angamba hihaona amin'ireo mpitarika sasantsasany eto amin'izao tontolo izao ary hiezaka hanontany azy ireo raha tena tian-dry zareo tokoa ny hahafatesan'ny planeta. Ary hitarika ny mediam-bahoaka hiditra ao anatin'ny resaka satria betsaka ny mpanao gazety hanatrika ny COP15 saingy mihevitra aho fa io no lanonana tokana andehanan'ny bilaogera maro hanatrika lanonan-dehibe tahaka izao. Ka somary hafakely izany. Ary manantena aho fa hanao asa tsara amin'ny fitaterana momba ny fikorontanan'ny toetrandro.
DS: Sylwia Presley no manontany, “Ahoana ny nanovan'ny Global Voices ny fiainanao tamin'ny fiasana taminy?”
DC: Breziliana moa aho ary tena mankamamy zavatra maro ar mihevitra aho fa efa manana anjara toerana ao aminay ny Global Voices satria mahay zavatra maro izahay avy aminy ary mitondra ny sasany amin'ny lohahevitra avy aty aminay resahana isanandro amin'ny namana ho ao Global Voices koa izahay.
Indraindray aho mitondra lohahevitra tahaka ny ady amin'ny toerana lavitra tahaka an'i Afrika na olona matin'ny hanoanana any Kazakhstan. Mihevitra aho fa mahatonga ahy ho ranga kokoa ny Global Voices fa ao anatin'ny tontolo iray isika ary misy olona hafa ao anatin'ny fiainana tahaka izany; fa tsy ny namana akaiky antsika ihany.
DS: Avy amin'i Ethan ity fanontaniana ity: “Aiza aho no mahafantatra bebe kokoa momba ny hira Technobrega?”
DC: Efa hitako tao amin'ny Twitter io fanontaniana io fa natahotra aho satria tsy mihaino technobrega. Fa efa nanao fikarohana aho ary misy tranonkala iray antsoina hoe bregapop.com ary manangona style hira brega maro ry zareo ary tafiditra amin'izany ny technobrega ary mahaliana ilay izy satria ahitana laharan-telefonina Orkut ry zareo eo amin'ny zoro mombamomba ny tarika. Ka raha te-hifandray amin'izy ireo ianao dia afa-mandeha ao amin'io vondrom-piarhaamonina io ary mahita artista maro avy any Belém do Pará, toerana nisongadinan'ny technobrega.
Efa nampiditra lahatsary YouTube technobrega maro ao amin'i ovondrom-piarahamonina io ihany koa ry zareo ka tena manala voly izany. Mahaliana ny fampiasan-dry zareo mediam-bahoaka sy fitaovana tranonkala 2.0 hafa ao amin'io habatranonkala io.
DS: Ahoana ny fijerinao ny hoavin'ny Global Voices ao anatin'ny dimy taona?
DC: Amin'ny hoavin'ny Global Voices mihevitra aho fa hanorina votoaty tsara kokoa ao amin'ny habaka Lingua ary mihevitra aho fa hanangana vondrom-piarahamonina malaza isika. Halaza isika. Olona maro no te-handray anjara ao amin'ny Global Voices. Ato amin'ity lanonana misy antsika amin'izao fotoana izao ity, maro ny olona nanontany ahy, “ahoana ny fomba handraisanay anjara amin'i Global Voices?” Ka dia mihevitra aho fa hihalehibe ity vondrom-piarahamonina ity.